३५ बर्षसम्म पोस्टमार्टम गर्नेको दर्दनाक कहानी: मरेको मान्छेले औठि माग्दा डराए ! – ramechhapkhabar.com
३५ बर्षसम्म पोस्टमार्टम गर्नेको दर्दनाक कहानी: मरेको मान्छेले औठि माग्दा डराए !
म’रेको मान्छे देख्दा सम्भवत सबैलाइ ड’र नै लाग्छ । कतिपय मान्छे त म’रेका मान्छे देखेपछि बेहो’स नै हुन्छन् । तर ६३ बर्षिय बालकृष्ण बोहोराले जिवनका अधिकांस समय म’रेका मान्छेको शरिर चि’रेर बिताए्का छन् । २०११ सालमा पर्वत जिल्लामा बाबा खडे र आमा चिजा बोहोराको सन्तानका रुपमा जन्मिएका बालकृष्णले जीवनभर मान्छे चि’र्ने जागिर गरे ।